Viticulture | Umlimi wasemadlelweni we-intanethi | April 2020
Incazelo yefomu hybrid lamagilebhisi "Ukuguqulwa"
Kuze kube manje, inani elikhulu lamagilebhisi aphethwe futhi bonke banamathuba athile, okuthola kuwo uthando lwabalimi. Phakathi kwezinhlobonhlobo ezintsha okwamanje okwamanje zingakabhaliswa irejista yombuso wezinhlobo zamagilebhisi, "Ukuguqulwa" kubonakala ngokuphawulekayo. Inzuzo yalo enkulu yikhono lokuletha isivuno esihle futhi esiphezulu hhayi kuphela esifundeni saseNingizimu, kodwa ezindaweni ezinesimo sezulu esifudumele.
Ibanga lamagilebhisi "Kodryanka"
Zonke izinhlobo zamagilebhisi zinemfanelo yazo ehlukile, abalimi abazithandayo. Lokhu akukhathazi nje kuphela izici zokunambitheka nobukhulu beqoqo, kepha futhi ukuklanywa, ukukhula, ukuvuthwa kanye nokukhipha izikhathi, nemithetho yokutshala nokunakekelwa. Ngokuphathelene nalezi zici zezinhlobonhlobo zamagilebhisi "Codreanca", okubhekwa njengezihlobo zokuqala, futhi kuzokutshela ngezansi.
Ibanga lamagilebhisi "Laura"
Izinhlobonhlobo zamagilebhisi ezibizwa ngokuthi "Laura" sekuyisikhathi eside zithandwa ngabalandeli abaningi be-viticulture. Amaqoqo akhe amahle kakhulu futhi acelwa ukuba asuswe emagatsheni asehlathini futhi ngokushesha azame. "Laura" ingenye yezinhlobo ezivame kakhulu zamagilebhisi amber, okungajwayele ukutholakala ezimakethe nasezikhungweni zasehlobo.
Ibanga lamagilebhisi "Kesha"
Kunzima kakhulu ukuhlangabezana nomuntu ongeke akhathalele izithelo zomvini. Ngisho nabakhileyo eNingizimu, abonakala bechitheka ngobuningi bezinhlobonhlobo zalezi amajikijolo okumnandi, namanje abakunandaba nabo. Kodwa, naphezu kokubhujiswa kwabasemzini, bobabili kanye nabakhileyo kwezinye izifunda zezulu bazisa kakhulu lolu hlobo lwemagilebhisi afana noKesha.
Izinhlobonhlobo zamagilebhisi "Arcadia"
Izinhlobonhlobo zamagilebhisi "Arcadia" sekuyisikhathi eside ziba umhlobiso wangempela weziqephu zasekhaya nezivini ezinkulu. Lezi zinhlobonhlobo zafanelwe uthando olunjalo jikelele lwabavinini bewayini hhayi kuphela ngenxa yezinga eliphakeme lezitshalo, kodwa futhi ngenxa yokumelana okungavamile okungavamile kwezimo zezulu ezihlukahlukene nokuphila okulula ezindaweni ezihlukahlukene zezulu.
Izinhlobonhlobo zamagilebhisi "Moldova"
Phakathi kwabathandekayo bamagilebhisi amnandi, mhlawumbe, ngeke kube khona nalabo abangazange bazwe ngezihlukahlukene ezihlukahlukene eMoldova. Lelivini liyinto yonke, ethanda kakhulu abalimi abathandayo. Kunokumelana okuphakeme kakhulu nokunakekelwa okungahloniphi. Naphezu kokuthi lezi zinhlobonhlobo azikho amaqoqo amakhulu namajikijolo, isakudonsela ukunakekelwa kwezitshalo zayo ezingavamile.
Ezihlukahlukene zamagilebhisi "iLibya"
Umvini uyisihlahla esiwusizo kakhulu futhi esihlwabusayo. Ngaphezu kwalokho, phakathi kwezinhlobonhlobo zayo ungathola okungafani nokuthanda nje kuphela, kodwa nobukhulu, ubujamo nemibala. Kodwa kwabaningi bewayini, isici esibaluleke kunazo zonke yisikhathi sokuvuthwa samagilebhisi. Lesi sici sibaluleke kakhulu ezindaweni ezimozulu ezipholile, lapho izinhlobo zamuva zingase zingabi nesikhathi sokuvuthwa.
Izinhlobonhlobo zamagilebhisi "Monarch"
Kunezinhlobo eziningi zezithelo zomvini ezinezinhlamvu ezinkulu namajikijolo. Ngisho nangamazinga ahlukahlukene wezinhlobonhlobo, abanye abavinji bewayini abakhuthele bayakwazi ukufeza impumelelo engakaze ibe khona. Kodwa, uma kwenzeka ukuhlukahluka kwamagilebhisi akwaMonarch, imizamo ekhethekile ngeke kudingeke. Phela, ngisho naphezu kobukhulu besilinganiso samagilebhisi, amajikijolo alesi sithelo samagilebhisi asuke afinyelele emaqophelweni amarekhodi.
Ezihlukahlukene zamagilebhisi "Kardinal"
Emazweni aseningizimu ye-Ukraine neRussia yanamuhla, i-viticulture ibhekwa njengenye yezitshalo zasendulo zokulima. Mhlawumbe ngiyabonga ngalokhu, namuhla lesi sitshalo sezinkulunkulu siye saba namandla kakhulu ekukhuleni kuwo wonke umuntu. Ngempela, kunzima ukuthola isakhiwo esizimele, hhayi ukuhlobisa ngesihlahla somvini.
Izinhlobonhlobo zamagilebhisi "Isikhumbuzo seNovocherkassk"
Ukulima kanye nokuzaliswa kwezinhlobo zemagilebhisi ezintsha kuye kwasetshenziselwa izinkulungwane zeminyaka njengabachwepheshe, njengabadlali abalula. Ngenxa yomdlandla wabo neminyaka eminingi yokuzikhandla, kunezinhlobo eziningi zezinhlobo zemagilebhisi ezakhiwe kakade ezinganelisa noma yikuphi ukugcoba. Ngokuyinhloko, enye yemiphumela yokuhlolwa kwe-amateur, ethandwa kakhulu namuhla, i-Novocherkassk Anniversary yamagilebhisi.
Ibanga lamagilebhisi "u-Isabella"
Ngezinye izikhathi, kubonakala sengathi ukutshala isivini akuyona into enkulu, ngoba kuyisiko esingenakuzithoba. Kodwa, uma ufuna ukuthola amahlumela enempilo amagilebhisi, udinga ukwazi ezinye izimo zokutshala nokuzinakekela. Izithelo zomvini zika "Isabella" azigcini nje ezihlwabusayo, kodwa zihle kakhulu.
Izinhlobonhlobo zamagilebhisi "Amur"
Izithelo zomvini sekuyisikhathi eside zingabi yizindawo zezivini zaseningizimu kuphela, kodwa futhi nezindawo ezizimele zezindawo ezibandayo zaseNyakatho zaseRussia. Kodwa abaningi bayamangala ukuthi kunezinhlobonhlobo zemvelaphi yemvelo ezitholwe ososayensi futhi manje zisetshenziselwa ukukhiqiza njengabaxhasi bokumelana okukhulu.
Ibanga lamagilebhisi "iVeles"
Labo abafuna ukukhula ekhaya noma ezweni lamagilebhisi bavame ukuchitha isikhathi esiningi bazitholele ezihlukahlukene kakhulu. Futhi benza ngesizathu: kungcono ukuchitha izinsuku ezimbalwa ukuhlaziya isikhala se-inthanethi kunokutshala isihlahla sokuqala futhi ngemva kweminyaka embalwa ukuyeka. Ngezansi sifuna ukukujwayela ngokuningiliziwe ngenye yezinhlobo zemagilebhisi ezithembisayo nezithela kakhulu, okuyinto ekahle ekukhuleni ngeziqephu zasekhaya - iwayini leVeles.
Ibanga lamagilebhisi "Lydia"
Izinhlobo ezidume kakhulu zezobuchwepheshe ezisetshenziselwa ukunqoba izithelo zithi "u-Isabella" no "Lydia". Ngesikhathi esifanayo, ibanga lesibili ngokuvamile lihlala emthunzini, ngoba lifana kakhulu no-Isabella, futhi ngokuvamile liyibiza ngokuthi "Pink" noma "Red Isabella." Kodwa namanje, amagilebhisi "uLidiya" anezici zakhe ezikhethekile, okwathi wayebathanda abavinini bewayini abaningi njenge-amateur futhi njengezithelo zomvini zokusetshenziswa kwetafula, futhi njengesitshalo sokuhlobisa.
Ibanga lamagilebhisi "Ataman"
Amagilebhisi kulezi zinsuku ayeke ukuba into engavamile noma engenakufinyeleleka. Kukhona izinhlobo eziningi zalesi sitshalo, ezihlukile komunye nomunye, kokubili ngokubukeka nokunambitheka. Omunye wabo ngu-Ataman. Masikhulume ngakho ngokuningiliziwe. Incazelo I-Ataman yamagilebhisi Lokhu kuyimbangela yokuzalisa amateur, i-hybrid etholakala ngokuwela izinhlobo ze-Rizamat ne-Talisman.
Ibanga lamagilebhisi "Anyuta"
Abaningi bethu abanesifiso esikhulu babezokhula izitshalo ezihlukahlukene zensimu ekhanda lethu lasehlobo. Kodwa-ke, ngokuvamile sivele singakwazi ukuzinikela isikhathi esanele sokuzinakekela. Okukhethwa kukho kulokhu kuyisinqumo sezinhlobonhlobo, okufana okufanayo futhi akudingi ukunakwa okuningi.
Ezihlukahlukene zamagilebhisi "Isizwe"
Kungakhathaliseki ukuthi zingaki izinhlobo zezithelo zamagilebhisi, ngamunye wabo unomuntu siqu. Lokhu kubuye kubhekane nezici zokukhula komvini, nokuphikisana kwazo nezinambuzane ezihlukahlukene futhi, nakanjani, izici ze-fruiting. Ngenxa yezinhlobonhlobo ezinkulu zamagilebhisi, noma ubani angakhetha kahle ukuthi yini ekhangayo kuye.
Izinhlobonhlobo zamagilebhisi "Enkumbulweni Ye-Negrulya"
Ukuhlukahluka kwamagilebhisi athandwa kakhulu, phakathi kwezinhlobonhlobo zesikhathi sokuvuthwa phakathi, kungabizwa ngokuphepha ngokuthi i-Negrul Memory Grapes. Kwakudala indlela yokukhetha, eMoldova, ngokuwela izinhlobo ezimbili: i-Pieppel ehlukahlukene yama-Moldavian ne-hybrid. Izinhlobonhlobo Incazelo Izithelo zomvini ekukhunjweni kweNegrul kuyinhlobonhlobo etafuleni kakhulu etafuleni.
Ezihlukahlukene zamagilebhisi "uVictoria"
Kungakhathaliseki ukuthi zonke izinhlobo zamagilebhisi zingakhula kanjani ezimweni zezwe lethu, noma kunjalo, ngamunye wethu unezilwane ezifuywayo. Uma ungumlingisi wevisi elivuthiwe lamagilebhisi omvini, khetha izinhlobonhlobo zamagilebhisi omvini futhi ufuna ukukhula ngamaqoqo amakhulu, uzizwe ukhululekile ukukhetha amagilebhisi aseVictoria.
Ibanga lamagilebhisi "i-Aleshenkin"
Izinhlobo zamagilebhisi etafuleni zihlukaniswa ngokunambitheka okukhulu nokubukeka okumangalisayo. Akunakwenzeka ukudlula amaqoqo avuthiwe avuthiwe ngaphandle kokubeka ubhekeni emlonyeni wakho. Futhi umbala obumbulukile nokunambitheka okumangalisayo kwamajikijolo amakhulu okuthiwa "Alyosha" ngeke ashiye noma ubani ongenandaba. Incazelo yokuhlukahluka Amagilebhisi "Aleshenkin" angatholakala ngaphansi kwegama elithi "Alyosha" noma "No. 328".